I-Driftwood #2 /Indlu yasedolobheni i-Villa w/indawo yokubhukuda eduze nesundu cay - I-Airbnb
I-Driftwood #2 /Indlu yasedolobheni i-Villa w/indawo yokubhukuda eduze nesundu cay
Nassau, New Providence, i-Bahamas
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Dario
I-wifi esheshayo engu-83 Mbps, kanye nendawo yokusebenzela ekamelweni.
U-Dario Ungumbungazi ovelele
ICalypso House iyindawo yangasese, ene-gated multi villa ogwini oluseningizimu-mpumalanga enikeza ukubukwa okungavinjelwe kolwandle oluseningizimu-mpumalanga. Ungabuka izikebhe zokudoba Ama-Yacht kanye nama-catamarans ahamba ngomkhumbi angena futhi ashiye i-palm cay nsuku zonke egunjini lakho lokulala elikhulu noma ivulandi elibheke olwandle elingemuva.
Okukhanga kakhulu lapha ubumfihlo, nokuphumula. Kuyindawo yokubaleka ethule, isipiliyoni somsebenzi phesheya noma iholidi likakhiye ophansi.
Sibheke ngabomvu ukuthi uhlale!
I-Calypso House Villas iveza incazelo yangempela yokuphila kwesiqhingi sase-Bahamian esongwe ngesitayela sesimanje. Ukuhlanganisa i-island beach house, ne-farmhouse ne-townhouse yedolobha uthola okungcono kakhulu kwakho konke. Igceke elingemuva linamanzi anosawoti kanti ngaphambili kwendlu kunethafa elingadini elinezinhlobonhlobo zezihlahla nezihlahla ezimibalabala. Izivakashi zingajabulela ukubukwa okumangalisayo kolwandle kusuka ku-master bedroom ku-villa ngayinye. Kukhona ama-villas azimele ayi-5 endaweni.
Lapho amagagasi aphezulu ulwandle lukhukhuleka luze lufike odongeni lolwandle oluseningizimu futhi ngezinye izikhathi luze luphalaze. Lapho amagagasi aphansi amagagasi ehla aze afike ku-2 kuya ku-4 okusho ukuthi lonke ulwandle ivezwa obala okuveza inqwaba yamagugu olwandle afihliwe. Ngaphezu kwalokho kunesihlabathi esihle esifihliwe esivele sivele nsuku zonke esingamafidi angamakhulu ambalwa ukusuka emnyango wakho ongemuva. Indlela engcono kakhulu yokubuka ukushona kwelanga kusihlwa.
Ukuhluka kwale ndawo kusekelwe ekukhetheni kwayo kanye neqiniso lokuthi itholakala kude nedolobha kanye nezicupho zezivakashi endaweni kamasipala. Indawo inamasango futhi ingeyazivakashi kuphela. Siyaziqhenya futhi ngokugcina imithetho eqinile yokuhlanza kanye nokubulala amagciwane ngokuvumelana nezimfuneko ze-covid 19 ukuze zonke izivakashi zethu ziphephe. I-Calypso house itholakala eduze nezitolo ezinkulu ezimbili zegrosa ezihlinzeka ngenkonzo yokulethwa futhi sinabashayeli abazimele (abakhokhelwayo) abazinikele ekuhlinzekeni izivakashi zethu. Uma kungukuthula, ukuthula, ukuhlala yedwa kanye nomsindo wolwandle okufunayo, yilokhu!
4.92 · 78 okushiwo abanye
I-Seagull Gardens iyindawo enokuthula eyi-1 1/2 emabhuloki phansi ukusuka ePalm cay ogwini olungomakhelwane. Le ndawo iyikhaya lemindeni eminingi yabantu abadala asebekhulile, iningi labo elikhona njengamanje futhi elike lasebenza ngokomthetho.
Umnyango osenyakatho uhlangatshezwa umgwaqo omkhulu we-Main Street Yamacraw onomsebenzi wokuthutha umphakathi ungene ku-Bay Street wedolobha laseNassau kanye nedolobha elingaphakathi.
I-southern Street iphumela olwandle futhi yabelana ngasogwini nakho kokubili i-palm cay kanye ne-treasure cove, yomibili imiphakathi ephakeme enesango eliphakeme.
I-tide iza futhi ihambe kabili ngosuku futhi ihlinzekela ukubhukuda endaweni ephakeme kakhulu ye-tide futhi ihambe iye endaweni yesihlabathi emanzini aphansi kakhulu. Nganoma yisiphi isikhathi sosuku ungahlala kuvulandi yakho futhi ubuke izikebhe zikaseyili nezikebhe ziza futhi zibuya futhi zibuya emhlabeni odumile we-palm cay marina!
Sihlala sitholakala ngombhalo, nge-imeyili noma nge-WhatsApp kodwa siphendula ingxoxo ye-Airbnb ngokushesha kakhulu njengoba siqapha ukufakwa ohlwini okuningi nsuku zonke. Sinikeza izivakashi ubumfihlo bazo nendawo ukuze zijabulele iholide lazo kodwa sihlala sitholakala ukuze sisize nganoma yini edingekayo.
Sihlala sitholakala ngombhalo, nge-imeyili noma nge-WhatsApp kodwa siphendula ingxoxo ye-Airbnb ngokushesha kakhulu njengoba siqapha ukufakwa ohlwini okuningi nsuku zonke. Sinikeza…
UDario Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Nassau namaphethelo